Madaxweyne Siilaanyo oo sheegay inay xukuumadiisu dedaal gelinayso kor u qaadista ciyaaraha | FooreNews
Home wararka Madaxweyne Siilaanyo oo sheegay inay xukuumadiisu dedaal gelinayso kor u qaadista ciyaaraha
Madaxweyne Siilaanyo oo sheegay inay xukuumadiisu dedaal gelinayso kor u qaadista ciyaaraha
Hargeysa (Foore)- Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamud (Siilaanyo) ayaa sheegay inay xukuumadiisu dedaal gelinayso horumarinta noocyada kala duwan ee ciyaaraha. Madaxweynuhu wuxuu sidaasi ka sheegay mar uu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay orod yahanka caanka ah Jaamac Maxamud Aadan (Jaamcac Karaaciin) ka dib markii uu booqasho ku yimid Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamud (Siilaanyo) sheegay inuu orod yahanka ku soo dhawaynayo dalkiisii hooyo,isagoo intaas ku daray in xukuumada uu Hoggaamiyaa ay dhiirigelinayso Ciyaaraha waxaanu Madaxweynuhu tusaale u soo qaadatay Tartankii Ciyaaraha Gobolada Somaliland ee dabayaaqadii bishii December lagu soo gabo gabeeyay Magaalada Burco ee Xarunta Gobolka Togdheer .
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu cadeeyay inay kordhin doonaan isla markaana taageerida dhalinyarada iyo Ciyaaraha si ay u noqdaan kuwo mustaqbalka sumcad u soo hooya Somaliland .
Dhinaca kale Orodyahanka Caanka ah ee Jaamac Maxamud Aadan (Jaamcac Karaaciin) ayaa uga mahad naqay Madaxweynaha Somaliland, Wasiirka Ciyaaraha iyo bahda uu ku abtirsado ee ciyaaraha sida ay ugu soo dhaweeyeen dalkiisa hooyo taas oo uu xusay inay galisay Xamaasad iyo Shucuur Wadaniyadeed .
Jaamac Karaaciin wuxuu sheegay in mudadii uu ku jiray ciyaaraha orodada uu ku guulaystay 870 bilood, isla markaana uu dhawaan ku guulaystay tababarihii ugu wanaagsanaa aasiya iyo dalka Qatar-ba ee orodada.
Dhinaca kale, waxa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay caasimada dalka ee Hargaysa ka dib markii uu ka soo kicitimay magaalada Burco oo uu maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa, waxaana kaga hortagay deegaanka haleeya oo dhinaca koonfur bari ka xiga caasimada Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Mudane Cabdi Siciid Faahiye,Mas’uuliyiinta xidhiidhada ciyaaraha iyo dadweyne kale.
Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Mudane Cabdi Siciid Faahiye oo hadal kooban oo soo dhawayn ah halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay in orod yahanka caanka ah Jaamac Maxamud Aadan (Jaamcac Karaaciin) uu baal dahab ah kaga jiro taariikhda orodada Somaliland isla markaana uu yahay hormoodkii u horeeyay ee dhidibada u taagay sidii ciyaaruhu u noqon lahaayeen kuwo soo jiita bulshada.
Md. Cabdi Siciid Faahiye waxa uu xusay in orod yahankani uu mashaariic kala duwan oo dhinaca Sportiga ah dalka u wado.
Previous PostDaahir Rayaale Oo sababeeyay Asbaabaha uu u laalay Murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen Next PostAkhri Waraaqda uu Dahir Riyaale usoo qoray ee uu ku dhex dhexaadinayo labada dhinac xisbiga UDUB isku haysata